Truth be known: September 2007
Time shown are Burma Standard Time
2:35 pm: shots were fired on Pann Soe Tan and San Pya. Standoff between the protesters and the army on Anawrahta Road.
2:43 pm: reports of soldiers beating the teachers who are helping students to demonstrate at North Oakkala.
2:49 pm: shootings at Pan Soe Tan
3:11 pm: reports of crowd marching from Shwedagon East Gate. Another group has arrived Nursing University via Phone Gyi Street. Students are heading that group.
3:18 pm: many protesting groups at various places.
3:21 pm: youths from some wards and quarters have blocked the roads in order to prevent the army coming in.
3:29 pm: reports of standoff between protesters and the army at Mandalay Phayargyi.
3:33 pm: about 300 students marching at Tamwe Township.
3:59 pm: protesters demands all over Mandalay on 33rd st between 83rd and 84th
4:24 pm: Army barricaded Pan Soe Tan. report ofagroup of protester near Mingalar Bazaar. small lanes are all blocked by army. Only the main road is accessible.
4:30 pm: full of monks and people on 84th street, Mandalay. estimated more thana100,000. so far, no shooting.
4:31 pm:2groups of protesters in downtown Rangoon. one went towards Pazundaung and one towards Ahlone. Army has circled the Ahlone group.
4:42 pm: blood everywhere on Pan Soe Tan. Eye witness said they used iron rods.
4:47 pm: reports of ICRC on the road.
5:05 pm: eye witness report of foreigner old lady being shot(unconfirmed)
5:38 pm: gun fires at Kyaut Myaung, Thida street. Arrests were made to those who climb on the trees to hide.
6:10 pm: USDA thugs leads anti-protest protest in Nyaung Oo. At least one person from one household is ordered out by force. Suppose to beapreparation for Mr Gambari visit tomorrow. It isatrick by the junta.
7:02 pm: Similar anti-protest by USDA thugs in Kyaut Padaung. But the monks who are holding an anti government protest outnumbered them.
9:01 pm: Army on the move to raid Bargaya monastery and Aung Mingalar monastrey at the junction of U Wi Sa Ra and Bargaya road.
9:05 pm: People from Bo Moe street, Damayone street and Myay Nu street are waiting.
9:28 pm: Raids started on almost all the monasteries in Rangoon. shots were fired at onlookers.
9:29 pm: Call UN(Rangoon) please!
Posted by generation96 at 10:32 PM0comments
The dog seen here in plain clothes is believed to be the official who led the crackdown near Traders Hotel on 27 Sep.
Sign the petition initiated by AVAAZ by following the link
Posted by generation96 at 11:52 AM0comments
Posted by generation96 at 10:58 AM0comments
Standoff near Sule
Posted by generation96 at 1:40 AM0comments
US announced more sanctions against Burmese junta.
UK calls for UN meeting.
China calls on all parties to exercise restraint.
Russia said Burma is notathreat to the Regional Peace and stability.
India said it is their internal affair.
Asean said blah blah blah..
JEEZZ….haven’t the world seen enough? Are all the world leaders STUPID?
Be damned with US for sanctions. Didn’t Mr Bush know SPDC never really care sanctions. Damn, ASEAN has been selling their products high and buying Burma resources low. The generals do not care as long as they live in lavish lifestyle. Don’t you see it Mr Bush?
Be damned with UK for calling UN meeting. Didn’t Mr Brown even guess China and Russia would block the move? Why waste time calling something which would never really happen? Afterall, China has been using Burma asagolden trash bin for years. Don’t you see Burma Army has been buying Chinese made Jets, Tanks and most prominently military trucks Mr Brown?
Be damned with China for telling ALL parties to exercise restraint. Did the monks carry guns? Did the protesters riding tanks? Who should exercise restraint? ALL parties? Thanks for not advising Burma Army to crush human heads with tanks.
Be damned with Russia for saying Burma is notathreat to regional peace and stability. Right, it will be only when Burma completed nuclear plant with your help. By then, Moscow vault would be filled with millions of dollars from our severely poor people pockets. Oh, sorry, you are already earning quitealot by training those brainless heads from military for nuclear technology for about 6-7 years now. If you want to see live another Chernobyl disaster, I recommend you assign some Russians at Burma nuclear site when it is up and running.
Be damned with India for saying it is internal affair. How about Burma stop buying your aging helicopters and stop discussing selling natural gas at way too low price? Wouldn’t you mind if we allow you to see cocoa islands personally so that you are sure there are no Chinese naval personnel present?
Be damned with ASEAN for everything. Big words, small words, stern words, soft words, etc..etc. What if Burma stop selling natural gas to Thailand? What if Burma revoke license to chop down trees from Thailand companies? What if Burma ordered out all the Singapore fish and prawn farms? What if Burma abruptly stop Patronas from drilling in Burma Sea?
It is time the world leaders stop issuing useless statements. Save the papers, save the breath. It is time to ACT. Use the force and send the army back to barracks.
UN = Useless & Nothing
If UN wants respect from the people all over the world, lead the whole world, shut every country up and send troops into Burma. That is the right thing to do. The people of Burma are also human beings on earth. We are not to be enslaved. If UN is establish to help the people all over the world. ACT! NOW!
Posted by generation96 at 12:30 AM2comments
People running away from charging riot police and soldiers (shots were fired andaman was seen killed, which could probably beaJapanese journalist.
A standoff on Sule Pagoda Road
Shots of tear gas
The killers on the move
Posted by generation96 at 12:23 AM0comments
Blood of the monks
Blood and glasses
Photos taken from komyintaung
Posted by generation96 at 12:05 AM0comments
ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကျော်ဇော လို့ ဒီသတ္တ၀ါကို ခေါ်သတဲ့။ ၂၅ရက်နေ့ ရွှေတိဂုံ အရှေ့ဖက်မုဒ်မှာ သံဃာတော်တွေကို ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ရာမှာ ဦးဆောင် အမိန့်ပေးခဲ့သူပါ။ တွေ့တဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေသလို ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ နှက်နိုင်ပါတယ်။ ခြေထောက်နဲ့ကန် ဒူးနဲ့တိုက် ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ဆော် ပုလင်းကွဲနဲ့ထိုး နည်းမျိုးစုံသုံး ကြိုက်သလိုသာ ဆော်ပါ။
ဓာတ်ပုံကို ကိုထိုက်ဆီက ယူပါတယ်။
Posted by generation96 at 11:51 PM0comments
Posted by generation96 at 5:19 PM0comments
27 Sep 07, 14:40minzaw: ဆူးလေကို ၀င်လို့ ရသမျှလမ်း အကုန်ပိတ်လိုက်ပီ
27 Sep 07, 14:40minzaw: စစ်သားတွေက ၀ါးရင်းဒုတ်တွေနဲ့ ကားမှတ်တိုင်ကလူတွေကို ပါ ၀င်ရိုက်နေတယ်
27 Sep 07, 14:40minzaw: ကိုယ်ပိုင်ကားတွေကိုလဲ တားပြီးစစ်နေတယ်ဖဆပလ ရပ်ကွက်ထဲ ၀င်ပြေးတာတောင် အိမ်ထဲ ၀င်ရိုက်တယ်တဲ့
27 Sep 07, 14:44Niknayman: အောင်ဆန်းကွင်းရှေ့မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို သေနတ်ကိုင်စစ်သား (၃) ယောက်က လိုက်ဖမ်းနေတာမြင်ရတယ်။
27 Sep 07, 14:45minzaw: ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ကို ဂန်းရှော့နဲ့ ပြည်သူ(၅)ယောက် ဒီနေ့ထပ်ရောက် (၁)ယောက်က အသေနဲ့ရောက်
27 Sep 07, 14:46Niknayman: ခုလေးတင် စံပြရုပ်ရှင်ရုံရှေ့နေဖြတ်ပြီး မော်တင်ဘက်ထိ အနော်ရထာလမ်းတလျှောက် ဘုန်းကြီး အပါး 20ခန့်နဲ့ လူအင်အား 3000ကျော် လူထုတဖွဲ့ ချီတက်သွားပါတယ်။စစ်ကားတစ်စီး ဘုန်းကြီးလမ်းတလျှောက်ဖြတ်သွား (မျက်မြင်)ားပေမဲ့ အပစ်အခတ်မရှိပါဘူး
Posted by generation96 at 4:23 PM0comments
27 Sep 07, 14:03Niknayman: : မန္တလေးမှာ လူတွေ၈၄လမ်းမှ မြောက်ဘက်ကိုတက်လာနေတယ် ၈၄လမ်းနဲ့၃၉လမ်းထိပ်မှာ တပ်ကပိတ်ထားတယ် ထိပ်တိုက်တွေ့တော့မယ်
27 Sep 07, 14:04Niknayman: သိမ်ဖြူဘက်မှ ရေကျော်လမ်းမကြီးရောက်လာပါပြီ ။ ဆူးလေမှာတော့ ပစ်နေပြီ ဘုန်းဘုန်းတွေကျန်ခဲ့ပြီး လူတွေဆက်လက်ချီတက်သွားတယ် ။
27 Sep 07, 14:08minzaw: ဆူးလေမှာ ပစ်ပြီ ဘီဘီစီ သတင်းထောက်တစ်ယောက် သေသွားပြီ ကျောင်းသားနဲ့ လူထု တစ်သောင်းခွဲ ရေကျော်ကနေ ပုဇွန်တောင်ကို ချီတက်သွားကြတယ်
27 Sep 07, 14:10minzaw: တီရှပ်အပြာဝတ်ထားပြီး သေသွားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကို ဒိုင်နာကားနဲ့တင်သွားတယ်
27 Sep 07, 14:11minzaw: လက်ရွေးစင် လဘက်ရည်ဆိုင်နားတွင် ဖြစ်ပါသည်
27 Sep 07, 14:18myochit: UN ကအခုမှ မြန်မာပြည်တွင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်သော စစ်အစိုးရ၏အကြမ်းဖက်မှုများကို တိုင်ကြားနိုင်သော ဌာန၏ ဖုန်းနံပါတ်များ ဖြစ်ပါသည်။ 554625, 554597 အာဏာရှင်များ၏ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားနေသော နေရာများကို ပြော၍ တိုင်ကြားနိုင်သည်။
27 Sep 07, 14:23minzaw: ဆူးလေနားမှာ အဖွားကြီးတဦးမှာ လူပိပြီး သေဆုံးသွားတယ်လို့ သိရ
27 Sep 07, 14:20Niknayman: လောလောဆယ်ဆူးလေမှာ(၇)ယောက်သေသွားပြီ
27 Sep 07, 14:28Niknayman: ထားဝယ်မှာလည်း.ဆန္ဒပြနေကြသော်လည်းစစ်တပ်မှမနှောက်ယှက်သေးကြောင်းသ်ရပါသည်။
27 Sep 07, 14:34minzaw: လမ်းပေါ်ကလူတွေ ဖယ်မပေးရင် အပြင်းထန်ဆုံး ကိုင်တွယ်မယ် extreme actionလို့ နအဖက သတင်းထုတ်
Posted by generation96 at 3:51 PM0comments
Aftermath of army break in.
Posted by generation96 at 3:38 PM0comments
27 Sep 07, 12:46minzaw: ဆူးလေနားက ပိတ်ထားတဲ့ နေရာနားမှာ လူတွေ အများကြီး ထိုင်ဆုတောင်းနေကြတယ် လက်ခုပ်တီးတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးဘဲ
27 Sep 07, 12:44Niknayman: ဆူးလေမှာချီတကိနေပါပြီ
27 Sep 07, 12:40minzaw: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်များအားလုံး အဖမ်းခံရကြောင်း AAPP အတွင်းရေးမှူး ကိုတိတ်နိုင်မှ အတည်ပြုပြောကြားပါတယ်
27 Sep 07, 12:48Niknayman: ကံဘဲ့နှင့်တောင်ဥက္ကလာငွေကြာရံကျောင်းတိုက်အနီးတွင်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူများနှင့်စစ်သားများရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ရာစစ်တပ်မှသေနတ်များပစ်ဖေါက်၍လူစုခွဲ၊ယခုလမ်းမတွင်မည်သူမျှမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ထားသည်.သေနတ်သံများဆူညံနေကြသည်.။
27 Sep 07, 13:07Niknayman: တောင်ဥက္ကလာမှ အိမ်များကို ပိုက်စိတ်တိုက်ရှာမည်ဟု သိရ။ ဖုန်းဖုန်းများအား စောင့်ရှောက်ထားခြင်းကြောင့် ဟု သိရပါသည်။
27 Sep 07, 13:04Niknayman: တာမွေ နတ်ချောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် သိမ်ဖြူ မင်္ဂလာရာမ မှ ဘုန်းဘုန်းများ အကုန် လုံး အဖမ်းခံရသည်သိရသည်.
27 Sep 07, 13:02Niknayman: တောင်ဥက္ကလာနေရာ က ၁၂ ရပ်ကွက်မာဃလမ်းမှာလည်းဖြစ်နေတယ်တဲ့
27 Sep 07, 12:58Niknayman: တောင်ဥက္ကလာ သစ္စာလမ်းနဲ့ ဗဟိုလမ်းနားမှာ လူတွေနဲ့တပ်နဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ နေကြပြီ။ တပ်ကကြံ့ ဖွံ့ တွေကိုရှေ့တန်းတင်တားသည်။ နောက်မှာတပ်တွေကရှိပြီး လူထုတွေဒေါသထွက်နေ။လမ်းမှာလဲခဲလုံးတွေနဲ့ပျံ့ ကျဲနေကာ အခုမျက်ရည်ယိုဗုံးတွေခွဲနေတယ်။
27 Sep 07, 13:10Niknayman: မန္တလေး(၃၅)လမ်း မြတောင်ဖက်တွင် ဘုန်းဘုန်းတို့ထွက်ဖို့ပြင်နေကြောင်း လမ်းတွေပိတ်ထားလို့ လူထုနှင့် တပ် အခြေအတင်ဖြစ်နေကြသည်။
27 Sep 07, 13:14Niknayman: နယ်မြို့ ကြီးတစ်မြို့ မှ ထိပ်ပိုင်းအရာရှိကြီးမှ ၄င်းတို့မြီု့ တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသည့် ဘုန်းဘုန်းများနှင့် ပြည်သူအား စစ်တပ်မှ ပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းမည်ဆိုပါက ၄င်းအနေဖြင့် လုံးဝသဘောတူမည် မဟုတ်ကြောင်း ခိုင်လုံစွာဖြင့် သတင်းလျှိ့ ဝှက်ပေးပို့ လာပါသည်။ (အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် မြို့ အမည်နှင့် အရာရှိကြီးအမည်ကို ထုတ်ဖေါ်ပြောပြမရသေးပါ။ စာဖြင့် ခိုင်လုံစွာ အကြောင်းကြားလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။) - နစ်နေမန်း။
27 Sep 07, 13:17Niknayman: ငွေကြာရံမှာ မနက်က ထွက်ပြေးလွှတ်မြောက်သွားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပြန်ရောက်နေကြပီ ။ အဲဒီဘုန်းကြီးတွေ ဆွမ်းစားနေတဲ့အချိန်ကိုအခုပြန်ဝင်ဖမ်းနေတယ်မိုးပေါ်ကိုသေနတ်ပေါက် ပီး ပြန်လည်ဝင်ဖမ်းနေပါတယ် (((ခိုင်လုံသောသတင်း))).ထို့ြေ့ကာင်ုလူထုက ငွေကြာရံကျောင်းမှ လုံခြုံရေးတပ်ကို ၀ိုင်းထားသည်ဟု သိရသည်။
27 Sep 07, 13:21minzaw: ငွေကြာရံမှာ လူထုနဲ့ စစ်တပ်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့နေပါတယ် မျက်ရည်ယိုဗုံး ၈လုံး ပစ်ပေမဲ့ လူထုက လူစုလုံးဝမခွဲပါ
27 Sep 07, 13:27Niknayman: ဘားလမ်းတွင်လည်းသေနတ်သံများကြားရကြောင်းပြောဆိုပါသည်.
27 Sep 07, 13:31Niknayman: ၃၃ လမ်းနျင့်အနော်ရထာလန်းတွင်..မျက်ရည်ယို ဗုံး ၃လူံးခွဲခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်.။
27 Sep 07, 13:34Niknayman: ဆူးလေတွင်ပစ်နေပါ့ပြီ,။တယောက်ထိထားပါသည်.။အသေအပျောက်တော့မသေသေးပါ.
27 Sep 07, 13:36Niknayman: အင်းစိန်သန်းတစ်ရာလက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွင်ဒီကနေ့မနက်၆နာရီတွင်ကြံဖွက်အယောက်၁၀၀ခန့်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအင်းစိန်မှလူခံကပြောကြားဘာသည်။ ဆက်လက်ပြီးပြောကြားရာမှာ GTI ကျောင်းဝင်းတွင်းကြံ့ဖွတ်အယောက်၂၀၀ခန့်ကိုဂတုံး တုံးပေးနေတာကိုလဲတွေ့ခဲ့ကြကြောင်းပြောကြားပါသည်။
27 Sep 07, 13:48minzaw: သိမ်ကြီးဈေးမှာ ရိုက်ပွဲစနေပြီ (ဖုန်းဝင်တာ)
27 Sep 07, 13:49minzaw: သောင်းနဲ့ချီတဲ့ လူတွေ ရန်ကုန်မှာ ထွက်နေပြီ
Posted by generation96 at 3:28 PM0comments
Posted by generation96 at 11:21 AM0comments
Posted by generation96 at 11:04 AM6comments
There have been reports from Burma that the Riot Police and SwanArrShin(SPDC thugs, SAS) who were stationed on the streets of Rangoon are in fact the soldiers of notorious Burma Army. One source mentioned the delivery of 50 new Riot Police uniforms to the Army just yesterday, 26-Sep-2007. Many other said SAS people are also soldiers in civilian clothes.
Posted by generation96 at 10:56 AM0comments
Guns on the fences. The brave warriors who dare to shoot and kill unarmed monks and people.
Photo taken from ko-htike.blogspot.com
Posted by generation96 at 10:53 AM0comments
Thanks to an unknown civilian reporter and BBC, the beatings at the East Gate of Shwedagon can now be seen HERE.
May the people of Burma succeed!
Posted by generation96 at 8:41 AM0comments
အပ်တိုတောင်မပါတဲ့ သံဃာတွေကို တုတ်တွေ၊ ဒိုင်းတွေ၊ သေနတ်တွေနဲ့ ရဲရဲတောက် ရင်ဆိုင်နေတဲ့ အရိုင်းအစိုင်းများ
အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာ လျှောက်လှမ်းဆဲ ပြည်သူ့ အာဇာနည် သံဃာများ
Posted by generation96 at 11:56 PM2comments
26 Sep 07, 16:03
Niknayman: မန္တလေး လမ်း(၈၀)တွင် ပစ်ခတ်မှုများရှိ။ ထိခိုက်မှုများရှိ။ ဖုန်းဖုန်းတို့မှ ရှေ့မှချီတက်။ ဖုန်းဖုန်းများ လူများ လုံးဝကြောက်ရွံမှုမရှိပါ။
Niknayman: တာမွေ မင်္ဂလာသုခ ဖုန်းကြီးကျောင်းက ဖုန်းဖုန်းလေးပါး ဒဏ်ရာရတယ်။ အရိုက်ခံရတာ။
26 Sep 07, 16:01
Niknayman: လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံရှေ့တွင်လည်း သံဃာအပါး ၁၀၀၀ ကျော်ကို စစ်တပ်က၀ိုင်းထားကြောင်း သိရသည်။
26 Sep 07, 16:40
koyinaaw: အလုံ ဆင်မင်းဈေး အဆက် ... နောက်ဆုံးရသတင်း >>> ဖုန်းလိုင်းများ ပြတ်တောက်နေ ၊ ကားသုံးစီးနှင့် လူများကို အတင်း အဓ္ဓမ ဆွဲတင်သွား
Niknayman: ရွှေဂုံတိုင်ဘုရားနားမှာ ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်တယ်လို့ တယ်ကြားတယ် ၅ ချက်တိတိလို့ပြောပါတယ်။
26 Sep 07, 16:50
Niknayman: သိမ်ဖြူဈေးပွိုင့်အနီး မီးရထားလမ်းကုန်းတွင်လူထုများမြို့တွင်းမှမလာနိုင်စေရန်သံဆူးများချ အသင့်အနေအထားလုပ်နေ။
Niknayman: မန္တလေးတွင်ဘုန်းဘုန်းများက အသံချဲ့စက်ဖြင့် မနက်ဖြန်မှဆုံမည်ဟု အကြောင်းကြား၍ အေးချမ်းစွာလူစုစခွဲနေ။
26 Sep 07, 16:55
Niknayman: ရွှေတိဂုံ ပစ်ခတ်မှု... ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဆန်း (ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး)၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတင့်ဆန်း၊ အမှတ် ၁၆ ခြေလျင် တပ်ရင်း ယာယီ တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူး ရဲဇော်ဇော် တို့ ပါဝင်သည်။
Posted by generation96 at 11:41 PM0comments
26 Sep 07, 12:50Niknayman: ယမန်နေ့ညတွင် ရဲအထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲအုပ် ညိုဝင်း၊ (ရ၀တ)ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင် ၂၀ ခန့်က ကဗျာဆရာ ကိုငြိမ်းသစ်အား ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ကိုငြိမ်းသစ်အား မတွေ့သည့်အတွက် ဇနီးသည်အား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
26 Sep 07, 13:31Niknayman: ၃၄ လမ်းမှာ ပစ်ပြီ။ လူထုထွက်ပြေးနေရတယ်။
26 Sep 07, 13:50Niknayman: ၃၄ လမ်းဘက်မှာ သေနတ်နဲ့ပစ်တာ ကောင်မလေးတယောက်ထိတယ်။
26 Sep 07, 13:42Niknayman: ဆူးလေမှာ ပြစ်နေတယ်။ သေနတ်သံတွေ ကြားနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။
26 Sep 07, 13:53Niknayman: ရွှေဂုံတိုင်မှာပြစ်ခဲ့တာ ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါး (သို့ ) သုံးပါး ပြန်လွန်တော်မူတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ ပိုမိုသေချာအောင် သတင်း ထပ်ပြောပါမည်။
26 Sep 07, 13:57Niknayman: ဆူးလေ AA phermacy ရှေ့မှာ လုံခြုံရေးလုပ်တဲ့ကောင်တွေ ဒိုင်းတွေနဲ့ ကာပြီး ဆူးလေဘုရားပေါ်တက်မရ အောင်လုပ်ထားတယ် လူတွေကတော့အများကြီးဘဲ။ အနော်ရထာလမ်းနဲ့ ဆူးလေမီးပွိုင့် မှာ ပိတ်နေပြီ၊ သေနတ်သံတွေ အတွဲလိုက်ပစ်တယ်၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဒဏ်ရာရတယ်။
26 Sep 07, 14:03Niknayman: ဆာကူရာတာဝါမှာရှိတဲ့ လေယဉ်လက်မှတ်အရောင်းဌာနတစ်ခုကို ဖုံးဆက်တော့ မလာပါနဲ့ ဆာကူရာတာဝါတစ်ခုလုံးပိတ်ထားလိုက်ပါပြီတဲ့.... အပြင်မှာလဲ သေနတ်သံတွေကြားနေရပါတယ်။
26 Sep 07, 14:06Niknayman: ရွေဂုံတိုင်မှာ ပြစ်ခံရတဲ့ ဘုန်းကြီးတပါး ပျံလွန်တော်မူတာ သေချာကြောင်းနဲ့ကျောင်းတိုက်ကို ပြန်သယ်သွားတယ်လို့ သတင်း ထပ်ရပါတယ်။
26 Sep 07, 14:14Niknayman: ဆူးလေမှာ ပြည်သူတွေအများကြီးဘဲ။ စစ်သားတွေကလည်း ၀ိုင်းထားတယ်။
26 Sep 07, 14:16Niknayman: ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ကို ဂန်းရှော့နဲ့ (၃)ယောက်ရောက်လာတာ (၁)ယောက် ဆုံးသွားပါပြီ။ ဆေးရုံကြီးကလူ ပြောပါတယ်
26 Sep 07, 14:17Niknayman: ဆူးလေမှာ စစ်တပ်က မိုးပေါ်ထောင်ပြီး ပြစ်ပြနေပါတယ်။
26 Sep 07, 14:23Niknayman: အလုံသစ်တောလမ်းထိပ် စာတိုက်မှတ်တိုင်မှာ လမ်းပိတ်ပြီး စွမ်းအားရှင်နှင့်လုံထိန်းများက ရဟန်းများနှင့်ပြည်သူများကိုဖမ်းဆီး ။ ကျန်ဘုန်းဘုန်းများ ဆက်လက်ချီတက်သွား။
26 Sep 07, 14:22Niknayman: ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဆေးရုံကြီးကို နောက်တယောက် ထပ်ရောက်တယ်။
26 Sep 07, 14:22Niknayman: လမ်း ၃၀ ဘက်မှာ သေနတ် ၇ ချက်ပြစ်ပါတယ်။
26 Sep 07, 14:25Niknayman: ကြည့်မြင်တိုင်ဖက်က လမ်းလျှောက်တက်လာသူတွေကို သခင်မြပန်းခြံရှေ့မှာ စစ်တပ်က ၀ိုင်းလိုက်ပြီ။
26 Sep 07, 14:47Niknayman: မန္တလေးတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းအပေါက်ဝများတွင် စစ်သားများ၊ရဲ များ ရှိနေကြပြီး သံဃာတော်များကို အပြင်သို့ ပေးမထွက်ခိုင်းပေ။ သံဃာတော်များမှာ နံနက် ဆွမ်းခံဖို့ ပင် ထွက်ခွင့် မရခဲ့ပါ။ မိုက်ရိုင်းသည်မှာ နေ့ လည်း ၁နာရီခန့် တွင် အစိုးရမှ ခေါက်ဆွဲထုတ်များကို မြတောင်ကျောင်းတိုက်သို့ ကပ်သည်။ သို့သော် သံဃာများက ခေါက်ဆွဲထုပ်များကို ၃၅ လမ်းမပေါ်သို့လွှင့်ပစ်ခဲ့ကြပြီး လမ်းမပေါ်တွင် ခေါက်ဆွဲထုပ်များ ပျံကျဲနေသည်ဟုသိရသည်။
26 Sep 07, 14:49Niknayman: မန္တလေးမြတောင်ကျောင်းအနီးတွင် မျက်ရည်ယိုဗုံးများပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေ။
26 Sep 07, 14:48Niknayman: ရုန်ကုန်ယုဇနပလာဇာမှာ ရှေ့ဘုန်းကြီးတွေ သွေးစက်လက်နဲ့ လျှောက်နေကြတယ်။
26 Sep 07, 14:48myochit: မြို့ထဲမှာ ဆိုင်တွေအားလုံးပိတ်လိုက်ပြီ၊ ဒါပေမဲ့ ပြန်တဲ့လူတွေအတွက် ကား အခက်အခဲတော့ ရှိနေတယ် ခုန ဒဏ်ရာရ အမျိုးသမီး က ရင်ဘတ်နဲ့ ပုခုံး မှာ ရတာလို့ သိရပါတယ်
26 Sep 07, 15:09Niknayman: သခင်မြပန်းခြံမှာပိတ်မိနေတဲ့ အင်အားတသောင်းခန့်က လှည်းတန်းဖက်ကို ပြန်လျှောက်လာပါတယ်။ သူတို့နောက်ကကြံ့ဖွတ်နဲ့ စစ်တပ်က ကားတွေနဲ့ လိုက်နေပါတယ်။
26 Sep 07, 15:13Niknayman: ပန်းဆိုးတန်းလမ်းပေါ်မှာ သံဃာတွေအပြည့်ဘဲ။
26 Sep 07, 15:12Niknayman: ဆူးလေမီးပွိုင့်မှာတော့ပိတ်နေဆဲပါ၊ ဆန္ဒပြသူတွေက အနော်ရထာလမ်းပေါ်မှာ ပွိုင့်ဘက်ကိုဦးတည်ပြေးလိုက် ပြန်ဆုတ်လာလိုက်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ အနော်ရထာလမ်းပေါ်မှာ ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေသူများကို ဘားလမ်းထဲကနေ လက်ခုတ်တီးအားပေးနေကြတာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်။
26 Sep 07, 15:14Niknayman: မန္တလေးမြတောင်ကျောင်းတိုက်အနီးတွင် လူအင်အား ရဟန်းအင်အားများသဖြင့်တားဆီးထားရာမှဖွင့်ပေးလိုက်ရ ၊ဘုရားကြီးဘက်တွင် ရိုက်နှက်မှုများရှိသော်လည်း (၈၂)လမ်းမှ မြောက်ဖက်သို့ဆက်လက်ချီတက်နေ။
26 Sep 07, 15:13Niknayman: ဖုန်းကြီး ရှစ်ပါး ပျံလွန်တော်မူကြောင်းကြားရ။
26 Sep 07, 15:25myochit: မြို့ထဲမှာခုရှိနေတဲ့ ကလေးကလှန်းပြောတယ် ကျောင်းသားတွေက အနော်ရထာလမ်းအတိုင်း အမေရိကန်သံရုံးဘက် ဆက်ချီတက်သွားတယ် စစ်ကား ၁၀ စီးလောက် ဆူးလေဘက်မှာအသင့်စောင့်နေတယ် လောင်ချာတွေလဲပါတာတွေ့တယ် ခုထိသူတော့ လူကိုတည့်တည့်စပစ်တာမကြားသေး သူလဲဆူးလေမှာရှိနေ သိမ်ဖြူမှာတော့စပစ်တယ်လို့ကြား
26 Sep 07, 15:35Niknayman: ဆူးလေမှာတော့ ရင်ကော့နေတဲ့သူ ၃ ယောက်လောက်ရှိ။ မိုးပေါ်ထောင်ဖေါက်တာ ၇ ချက် ၈ ချက် အရင်ဖေါက်ပြီး၊ ၂ ချက်လောက်ကတော့ တည့်ပစ်သလိုပဲ ဘယ်သူ့မှတော မထိပါဘူး။
26 Sep 07, 15:34Niknayman: လူထုတွေ အနော်ရထာလမ်းပေါ်ကနေ ကမ်းနားဘက်က ဆင်းသွားတယ်။ လူတွေ အများကြီးဖြစ်သွားတယ်။
26 Sep 07, 15:31Niknayman: အလုံသစ်တောလမ်းတွင် စစ်ကား(၆)စီး၊အင်အား(၁၀၀)ခန့်အပါအ၀င် စွမ်းအားရှင်များ ၀ိုင်းဖမ်း။ ရဟန်းများနှင့်လူများအဖမ်းခံရ။၊ ဖမ်းခံရ၊ရာတွင် မိန်းမပျိုလေးများပါပါဝင်။
26 Sep 07, 15:36Niknayman: ကြည့်မြင်တိုင် ဝေလုဝန်ဘက်မှာ လာရိုက်တဲ့လုံထိန်းတွေကို ဖုန်းဖုန်းတို့က ပြန်ရိုက်တာ ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရ။
26 Sep 07, 15:36Niknayman: မန္တလေး လမ်း(၈၀)နှင့်(၂၇)လမ်းထောင့်တွင် စစ်ကြောင်းတစ်ခုတွေ့နေရပါသည်။တစ်မြို့လုံးတွင်(၅)နေရာထက်မနည်းဖြစ်ပွားနေပါသည်။နန်းရှေ့တွင်လုံခြုံရေးအဖွဲ့နှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့နေပါသည်။လူအုပ်မှအသေခံမည်ဆိုကာတိုးဝင်လာသောကြောင့်လုံခြုံရေးများက လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ရပါသည်။
26 Sep 07, 15:42Niknayman: ဗားဂရာ ကိုးထပ်ကြီးရှေ့တွင် မျက်ရည်ယိုဗုံးယခုဖေါက်ခွဲနေပါတယ်။
26 Sep 07, 15:42Niknayman: ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်တွင် ပြည်သူများအား လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့များမှ လိုက်လံ ဖမ်းဆီးနေပါသည်။
26 Sep 07, 15:44Niknayman: ဗဟန်းမှာ ရဲတွေက သိပ်ရိုင်းတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေကို ကန်တယ်၊ ခေါင်းတွေကို ရိုက်တယ်။ လမ်းပေါ်မှာ လဲနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို တက်နင်းတယ်။
ကိုနစ် cbox မှ သတင်းများဖြစ်ပါတယ်
Posted by generation96 at 5:20 PM0comments
Arrest at Sule North Gate
Head injury suffered byamonk
Total chaos after beating and firing tear gas
Photos are taken from Reuters and niknayman blog
Posted by generation96 at 4:52 PM0comments